वर्षा अझै ३ दिन रहने, बाढी पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्क रहन मौसम विज्ञान विभागको आग्रह – Annapurna Daily
वर्षा अझै ३ दिन रहने, बाढी पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्क रहन मौसम विज्ञान विभागको आग्रह
On Aug 29, 2021 1,114
काठमाडौँ । केहि दिनदेखिको लगातारको वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । वर्षा अझै ३ दिनसम्म रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । देशका पूर्व-पश्चिम क्षेत्रमा अझै भारी वर्षा हुने पनि विभागले जनाएको छ ।
खासगरी लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले तीन हजार १८० घर डुबानमा परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार बाढी पहिरामा परेर ९०० घरसहित १५३ गोठ, ६० पुल, ८ विद्यालय र १४ सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।
जेठ ३० यता एक हजार ८७ पशु चौपाय मरेको छ । उक्त अवधिमा एक हजार १३० विपद्का घटनाबाट एक हजार २०९ घर परिवारका पाँच हजार ९२४ जना विस्थापित भएका प्रहरीले जनाएको छ ।
मनसुन भित्रिएसँगै नेपालमा अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी आजसम्म ९१ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा ४६ पुरुष, २३ महिला, १० बालक र १२ बालिका छन् ।
बाढीपहिरो र डुबानमा परी उक्त अवधिमा ११६ जना घाइते भएका छन् । बाढीपहिरामा परी ४४ जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ । बाढीपहिरामा परेका एक हजार २७५ जनाको विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज ५ गते मंगलबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आजदेखि दशैँ-तिहारका लागि नयाँ नोट साट्न पाइने
जवान रहन चाहानुहुन्छ भने नियमित गर्नुहोस् ओखरको सेवन
काजु खानु स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै लाभदायक हुने, यस्ता छन् चमत्कारी फाइदा
कान दुखेको, कान पाकेको देखि बहिरोपना हटाउनका लागि दतिवनको प्रयाेग निकै लाभदायक, यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका
के तपाई पनि बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु हुन्छ ? साब’धान यी रोगहरु लाग्न सक्छन्
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज ४ गते सोमबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
नरिवल खाँदा हुने यी १२ फाइदा बारे जान्नुहोस्
बहुचर्चित गायिका विष्णु माझीलाई ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक’ प्रदान
टन्सिलको समस्याले हैरान हुनुभएको छ ? सधैंको लागि छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय